कुमार पौडेलका हत्यारालाई कारवाही गर्न गृहमन्त्रालयको निर्देशन : आइजीपीलाई के होला? - Namaste Post
कुमार पौडेलका हत्यारालाई कारवाही गर्न गृहमन्त्रालयको निर्देशन : आइजीपीलाई के होला?
नमस्ते पोस्ट २०७६, २० माघ सोमबार २३:१८ 0
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरीमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। इन्काउन्टरको बहानामा हत्या गरिएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानविन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार हत्यामा संलग्न प्रहरी र इन्काउन्टरका लागि निर्देशन दिने अधिकारीमाथि कारबाहीका गर्न गृहले शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित निर्देशन दिएको हो।
कारबाहीसँगै गृह मन्त्रालयले पीडित परिवारलाई राहत व्यवस्थापन गर्न समेत पत्र लेखेर निर्देशन दिएको छ। आयोगको टोलीले पौडेलको परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन सिफारिस गरेको थियो। गृहले सोहीअनुसार गर्न भनेर पुन: निर्देशन दिएको गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले गृहबाट पत्र आइसकेको जानकारी दिए पनि नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्रीले आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भन्दै गृहबाट आयोगमा पत्र गएको जानकारी आएको बताएको छ। तर कारबाही भएको बारे भने कुनै जानकारी नआएको आयोगले जनाएको छ।
गत ५ असारमा प्रहरीको गोली लागेर सर्लाहीका नेकपा इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या भएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गएको विशेष ब्युरोको टोलीले उनलाई ९ राउन्ड गोली हानेर मारेको थियो। तर प्रहरीले भने पक्राउ गर्न जाँदा प्रहरीमाथि गोली प्रहार भएकाले सुरक्षाका लागि जवाफी फायर गर्दा पौडेल मारिएको दाबी गरेको थियो।
पौडेलको हत्यामा निकै विवाद भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानविन गरेको थियो। आयोगको अनुसन्धानले इन्काउन्टरको बहानामा प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि गोली हानेर मारेको निष्कर्ष निकालेको थियो। आयोगले उक्त छानविनपछि घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लगाउनेदेखि प्रशासनिक कारबाहीसम्म गर्न सिफारिस गरेको थियो।
गत ४ कात्तिकमा सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि आयोगले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीमाथि आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेकोमा अवहेलनाको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो।
आइजिपीलाई के होला?
आयोगको प्रतिवेदनमा पौडेलको हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भनेर प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी हत्या अभियोगमा फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई सचेत गराउन निर्देशन दिएको थियो। आयोगको सिफारिसमा गोली हान्न निर्देशन दिने तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारीसमेतलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सिफरिस गरेको थियो।
प्रहरी महनिरीक्षकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको विशेष ब्युरोका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह नै कुमार पौडेल हत्याका मुख्य अभियुक्त देखिएका छन्। विशेष ब्युरोका प्रहरीलाई निर्देशन र परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई मात्र रहेकाले निर्देशन दिने र आदेश दिने अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नै देखिन्छन्।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण माघ २८ गते अवकाशमा जान लागेका खनाल आयोगको निर्देशन पालना भएपछि हत्याका लागि निर्देशन दिएको गम्भीर अपराधको छानबिनको दायरामा तानिने छन्।